SomaliTalk.com » 2014 » February » 08
Home » Archive Maalinta February 8th, 2014
Sh. Daahir Macallin Cismaan oo ku geeriyoodey Diinsoor
Inaa Lillaahi Wa inaa Ileyhi Raajcuun. Bahda SomaliTalk.com waxay ka tacsidaynayaan geeridii ku timid Sh. Daahir Macallin Cismaan oo da’diisu ahayd 89 jir, kuna geeriyoodey Degmadda Diinsoor, khamiistii Febraayo 6, 2014. Waxaan si gaar ah tacsida ugu direynaa Maxamed Macallin Cismaan (All-man) oo ay walaalo ahaayeen marxuumka. Allah janadiisa fardowsa haka waraabiyo marxuum Sh. Daahir Macallin...
Dawladda Maraykanka oo Muwaadiniinteeda uga digtey in ay u Safraan Soomaaliya iyo Dawladda FS oo arrintaas ka jawaabtey
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Maraykanka (February 7, 2014) ayaa digniin u diray shacabka Maraykanka in aysan u safrin dalka Soomaaliya. Waxaana dignintaasi tibaaxday in “Dawladda Maraykanku aysan xilligan Safaarad iyo dublomaasiyiin rasmi ah ku lahayn gudaha Soomaaliya. Sidaas daraadeed dawlada Maraykanku aysan caawin karayn ama si wax-ku-ool ah ugu adeegi karayn muwaadiniinta...
War-saxaafadeed: Golaha Wasiirada oo yeeshay kulan aan caadi aheyn
Muqdisho, February 9,2014—–Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi aheyn, waxaana kulankan shir guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed. Kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray qorshe howleedka Wasaaraddaha, waxaana maanta qorshayaashooda soo bandhigay Wasaaraddaha Garsoorka iyo Dastuurka, Shaqada iyo Shaqaalaha,...